Shiinaha Duumada Pf Pv Qalabka tijaabada degdega ah iyo alaab-qeybiyeyaasha. Kibir
Malaria Pf / Pv Ag Rapid Test waa tallaal chromatographic socodka ah oo socod ah oo loogu talagalay ogaanshaha iyo kala duwanaanta Plasmodium falciparum (Pf) iyo vivax (Pv) antigen ee tijaabada dhiigga aadanaha. Qalabkan waxaa loogu talagalay in loo isticmaalo baaritaanka iyo caawimaadda baaritaanka cudurka ee plasmodium. Muunad kasta oo falcelin leh oo laga helo Duumada Pf / Pv Ag Rapid Test waa in lagu xaqiijiyaa hababka kale ee tijaabooyinka iyo natiijooyinka caafimaad.
SOO KOOBAN IYO SHARAXA IMTIXAANKA
Duumadu waa cudur kaneeco ka dhasha, hemolytic, qandho oo ku dhacda in ka badan 200 milyan oo qof una dhinta in ka badan 1 milyan oo qof sanadkii. Waxaa sababa afar nooc oo ah Plasmodium: P. falciparum, P. vivax, P. ovale, iyo P. malariae.
Malaria Pf / Pv Ag Rapid Test waxay isticmaashaa unugyada difaaca jirka ee gaarka u ah P. falciparum Histidine Rich Protein-II (pHRP-II) iyo P. vivax Lactate Dehydrogenase (Pv-LDH) si isku mar loo ogaado loona kala saaro infekshinka P. falciparum iyo P. vivax-5. Tijaabada waxaa qaadi kara shaqaale aan xirfad lahayn ama xirfad yar, oo aan lahayn qalab sheybaar
Imtixaanka Duumada Pf / Pv Ag Rapid waa tallaalka chromatographic immunoassay ee dambe. Qaybaha tijaabada xariijimaha waxay ka kooban yihiin: 1) suuf isku xirma midab burgundy midab burgundy leh oo ay kujiraan jiir anti-Pv-LDH antibody oo kuxiran dahabka kolloid (Pv-LDH-gold conjugates) iyo jiirka anti-pHRP-II antibody oo kuxiran dahabka colloid -gold conjugates), 2) xuubka 'nitrocellulose membrane strip' oo ay ku jiraan laba qaybood oo tijaabooyin ah (Pv iyo Pf band) iyo kooxda xakamaynta (C band) Kooxda Pv waxaa horay loogu duubay antibody kale oo anti-Pv-LDH gaar ah oo loogu talagalay ogaanshaha infekshinka Pv, Pf band waxaa horay loogu duubay polyclonal anti-pHRP-II antibodies si loo ogaado cudurka Pf, iyo C band waxaa lagu dahaadhay IgG anti-mouse-ka.
DIIWAANGELINTA IYO MAALADAHA LA SIIYAY
1.Qaabad kasta waxay ka kooban tahay 25 aaladood oo tijaabo ah, mid walbana lagu xiray boorso leh saddex shay oo gudaha ah:
a. Hal qalab cajalad.
b. Mid qalajiya.
2. 25 x 5 µL wasakhda caaga yar
3. Kaydinta Dhiigga Dhiigga (1 dhalo, 10 milix)
4.On xirmo xirmo (tilmaam loogu talagalay isticmaalka).
Kaydinta iyo NOLOSHA SHELF
1. Ku keydi qalabka baaritaanka ee ku baakad xiran kiishka daboolan xirmooyinka 2-30 ℃ (36-86F).
2. Mudada-nolosha: 24 bilood laga bilaabo taariikhda wax-soo-saarka.
Magaca Badeecada Duumada Pf / Pv Ag Degdega ah
Muunad serum / plasma / dhiig dhan
Jawaab qaraabo 98.8%
Waqtiga akhriska 15mins
Waqtiga shelf 24 bilood
Kaydinta 2 ℃ ilaa 30 ℃
Hore: Qalabka Baaritaanka Degdegga ah ee HIV
Xiga: Qalabka Duumada ee Duumada Pf
Talaabada 1: Keen shaybaarka iyo qaybaha tijaabada heerkulka qolka haddii la qaboojiyey ama la qaboojiyey.
Si fiican isugu qas tijaabada ka hor baaritaanka markii la dhalaaliyo. Dhiig ayaa dhalaalaya kadib marka la dhalaaliyo.
Tallaabada 2: Markaad diyaar u tahay inaad tijaabiso, ka fur boorsada qafiska oo qalabka ka saar. Dhig qalabka tijaabada
dusha nadiif ah oo fidsan.
Tallaabada 3: Hubso inaad ku calaamadeysid qalabka lambarka aqoonsiga muunadda.
Tilaabada 4: Ku buuxi caagaga yar ee caaga ah shaybaarka dhiiga si aanuu dhaafin safka muunada sida ku cad sawirka soo socda. Muga muunada waa kudhowaad 5 µL.
Adiga oo sita wadaha toosan, u wada mari tijaabada bartamaha muunada si fiican u hubso in aysan jirin goobooyin hawo ah.
Kadib kudar 3 dhibcood (qiyaastii 100-150 µL) oo ah Lysis Buffer isla markiiba.
Tallaabada 5: Samee saacad.
Tallaabada 6: Natiijooyinka waxaa lagu akhrin karaa 20 illaa 30 daqiiqo. Waxay qaadankartaa in kabadan 20 daqiiqo in asalka soo cadeeyo.
Ha akhrin natiijooyinka 30 daqiiqo kadib. Si looga fogaado jahwareerka, iska tuur qalabka baaritaanka ka dib markaad tarjunto natiijada.
1. NATIIJADA XANUUNKA: Haddii kaliya kooxda C ay jirto, maqnaanshaha midab burgundy ah oo ka tirsan labada qaybood ee baaritaanka (Pv iyo Pf) waxay muujineysaa in aan la helin antigens anti-plasmodium. Natiijadu waa mid taban.
2. NATIIJO CAADI AH:
2.1 Marka lagu daro joogitaanka kooxda C, haddii kaliya la sameeyo hoyga Pv, baaritaanku wuxuu tilmaamayaa joogitaanka antigen Pv-LDH. Natiijadu waa Pv togan.
2.2 Marka lagu daro joogitaanka kooxda C, haddii kaliya la sameeyo hoyga Pf, baaritaanku wuxuu muujinayaa joogitaanka antigen pHRP-II. Natiijadu waa Pf togan.
2.3 Marka lagu daro joogitaanka C band, labada qaybood ee Pv iyo Pv ayaa la sameeyay, tijaabadu waxay muujineysaa joogitaanka labadaba Pv-LDH iyo pHRP-II antigens. Natiijadu waa labadaba Pv iyo Pf mid togan.
3. INVALID: Haddii aan la samayn C band, tijaabintu waa mid aan ansax ahayn iyada oo aan loo eegayn midabka burgundy ee kooxaha imtixaanka sida hoos ku xusan. Ku celi tijaabada qalab cusub.
Xanuunka Ifilada AB Fudud
FOB Fecal Occult Qalabka Baaritaanka Degdegga ah ee Dhiigga
Qalabka baaritaanka degdegga ah ee H.pylori Ag
Qalabka Baaritaanka Degdegga ah ee HIV